Mpandefa Android 2 miaraka amina fomba fanao minimalista Ny ranomasina hazavana sy mamokatra | Androidsis
2 Android Launchers miaraka amina endrika minimalist izay maivana sy mamokatra
Tsy misy isalasalana fa ny iray amin'ireo zavatra lehibe mampiavaka ny Android amin'ny sisa amin'ireo rafi-pitantanana finday izay nisy sy misy mandraka ankehitriny, dia ilay goavana indrindra chameleon fahafaha ananantsika noho ny fanaingoana ary ambonin'izany rehetra izany dia mety omena antsika hanova ny efijery an-trano, fantatra koa amin'ny hoe "The Launcher".
Eny, izao no resahina amin'ny horonantsary -post, ny Mpandefa ho an'ny Android manana fomba fanao minimalist. Mpandefa maimaimpoana tanteraka, manan-kery amin'ny ankamaroan'ny karazana Android, eny fa na dia ny faritra farany ambany indrindra !!, ary ambonin'izany rehetra izany, ankoatry ny fanaovana hazavana kokoa ny fitaovantsika Android, mandritra izany fotoana izany, dia hataon'izy ireo mandinika bebe kokoa sy hampitombo bebe kokoa mamokatra.
Amin'ireo Application Launcher rehetra izay efa nandramako nandritra ny taona maro natokana ho an'ny rafitra fiasa Android, ary na dia efa fantatrareo rehetra aza, dia mpiaro mafana an'io ny Launcher tsara indrindra manerantany dia mbola Nova Launcher; Raha tsy maintsy nanapa-kevitra ny amin'ny rariny aho 2 Mpandefa fomba minimalista maivana maivana izay misy, tsy isalasalana fa misafidy ireo Android Launchers 2 hatolotro eto ambany aho.
Ny voalohany amin'izy ireo dia mpandefa lohahevitra tena be lohahevitra, zava-baovao ahafahantsika miditra ho Early Access, raha ny faharoa kosa dia safidy tsy nisy fanavaozana nandritra ny 5 taona nefa amiko manokana dia iray amin'ireo roa tsara indrindra Fandefasana Android fampiasa minimalist izay niteraka.
Avy eo avelako ho anao ny rohy fampidinana an'ireo mpanafika roa, ireo mpandefa sasany izay ao amin'ilay horonan-tsary mijanona izay navelako tamin'ny fiandohan'ity lahatsoratra ity dia manao famakafakana lalina aho. Ka raha tena te hahalala ny zavatra rehetra atolotry ny fampiharana 2 manaitra ho an'ny Android ianao dia aza atsahatra ny mijery ilay horonantsary.
Na izany na tsy izany! Ho an'izay rehetra maniry ny fandraisam-peo ho horonantsary mitsangana mba hahita azy amin'ny efijery feno sy hahazo ny fiheveran'ireto Launcher ireto eo amin'ny fitaovanao, ho azy ireo avelako eo amin'ny faran'ny lahatsoratra, ilay video mitovy amiko efa namela anao tany am-piandohana fa toy ny horonantsary mitsangana, endrika mety indrindra hahitanao azy mivantana avy amin'ny efijery ny terminal Android-nao.
1 Sintomy maimaimpoana ny mpandefa iray voarara - minimalism & productivity (fidirana aloha) mivantana avy amin'ny Google Play Store
2 Sintomy maimaim-poana ny Z Launcher, ilay Nokia Launcher angano izay mbola mirehitra ankehitriny na dia efa nilaozana tanteraka aza ny fivoarany
3 Horonantsary mitsangana izay ilazako anao amin'ny antsipiriany momba ireo mpanafika roa ireo. (Fandraisam-peo efijery Huawei P40 PRO)
Sintomy maimaimpoana ny mpandefa iray voarara - minimalism & productivity (fidirana aloha) mivantana avy amin'ny Google Play Store
mpandefa volavolan-dalàna - minimalism & famokarana
Sintomy maimaim-poana ny Z Launcher, ilay Nokia Launcher angano izay mbola mirehitra ankehitriny na dia efa nilaozana tanteraka aza ny fivoarany
Mahamenatra fa Z Launcher dia lasa nilaozana tanteraka Satria, araka ny hitanao amin'ny horonan-tsary, dia Launcher iray izay mety hifaninana amin'ireo Launcher vao noforonina izay mitady mihoatra ny vokatra rehetra, ny fahatsorana ary amin'ny farany, ny minimalism atolotry ny mpandefa angano noforonin'i Nokia ho antsika.
Para ampidino izany fa tsy maintsy hampiasa ny toerana anaovana fampiharana UptoDown isika satria tsy hitantsika izany ao amin'ny Google Play Store. Eo ambanin'ireto tsipika ireto dia avelako ho anao ny rohy ho an'ny fampidinana mivantana ity Android Launcher mahafinaritra ity.
?Fampidinana maimaim-poana sy mivantana ny Z Launcher avy any Uptodown amin'ny fipihana eto?
Horonantsary mitsangana izay ilazako anao amin'ny antsipiriany momba ireo mpanafika roa ireo. (Fandraisam-peo efijery Huawei P40 PRO)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » 2 Android Launchers miaraka amina endrika minimalist izay maivana sy mamokatra
Windy Slider dia fialamboly vaovao izay entin'ny rivotry ny fizika zavatra
Ity dia iray UI 3.0 amin'ny beta amin'ny Galaxy S20 miaraka amin'ny Android 11